Maamulka gobolka Banaadir oo ka hadlay qarax ka dhacay Muqdisho - Jowhar Somali news Leader
Home News Maamulka gobolka Banaadir oo ka hadlay qarax ka dhacay Muqdisho
Maamulka gobolka Banaadir oo ka hadlay qarax ka dhacay Muqdisho
Maamulka gobolka Banaadir ayaa ka hadlay qarax maanta ka dhacay maanta degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan oo goobta uu qaraxu ka dhacay tegay ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku geeriyoodeen sarkaal watay gaariga qarxay oo la oran jirey Cabdishakuur Xuseen Cabdi Dhicisow (Jaabiri) iyo qof kale oo la socday sidoo kale waxaa ku dhaawacmay qaraxa askari ilaalo u ahaa sarkaalka.
“Qof walba waa inuu ka taxadaraa goobta uu dhiganayo gaarigiisa si aan qarax loogu xirin waana inay ciidamada ammaanka ka feejignaadaan talaabo walba oo lagu waxyeelaynayo shacabka Soomaaliyeed.”ayuu yiri afhayeenka.
Sarkaalka ku dhintey qaraxa loogu xirey gaarigiisa ayaa ka tirsanaa Maamulka Gobolka Banaadir isla markaana qaarigiisa qarax loogu xiray. Qaraxan loogu xirey sarkaalka gaarigiisa ayaa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab.
Madaxweyne Farmaajo oo khudbad u jeediyay Shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay
IMF oo sheegtay in Soomaaliya ku guuleysatay dib u eegistii 1aad ee Barnaamijka ECF